रोनाल्डो ब-ला-त्कार केसमा आयो यस्तो अपडेट, सजाय हुने ? - Nilo Khabar
Home रोचक/बिज्ञान प्रविधि रोनाल्डो ब-ला-त्कार केसमा आयो यस्तो अपडेट, सजाय हुने ?
रोनाल्डो ब-ला-त्कार केसमा आयो यस्तो अपडेट, सजाय हुने ?
नेभाडाका संघीय मजिस्ट्रेट न्यायाधीशले क्रिस्टियानो रोनाल्डोका वकिलले क्रिस्टियानो विरुद्ध लागेको ब’ला-त्का’रको केस खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। २०१० मा लास भेगासमा पोर्चुगिज अन्तराष्ट्रिय फुटबल स्टारले आफूलाई ब-ला’त्का-र गरेपछि चुप लाग्नको लागि ३ लाख ७५ हजार डलर भन्दा बढी दिएको भन्दै एक महिलाले मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
मुद्दाको सुनुवाई गर्ने न्यायाधीशलाई एक सिफारिशमा, मजिस्ट्रेट न्यायाधीश ड्यानियल अल्ब्रेग्सले बुधबार क्याथ्रिन मेयोर्गाका वकील लेस्ली मार्क स्टोभललाई लीक र चोरी भएको कागजातमा मुद्दा दायर गरेको आरोप लगाए।
“मेयोर्गाकाको वकीलको अनुपयुक्त आचरणको कारण उनको मामला खारेज गर्नु एक कठोर परिणाम हो,” अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जेनिफर डोर्सीको लागि आफ्नो सिफारिशमा अल्ब्रेग्ट्सले लेखे,”तर यो दुर्भाग्यवश न्यायिक प्रक्रियाको अखण्डता सुनिश्चित गर्नको लागि एक मात्र उचित स्वीकृति हो।”
अल्ब्रेग्ट्सले अदालतले रोनाल्डोले अपराध गरेको कुनै निर्णय नभएको र केहि प्रमाण पनि प्राप्त नभएको जानकारी गराएका छन्।
थप समाचार पढ्नुहोस :संसारको सबैभन्दा प्राचीन धर्मले एउटा सामान्य पशुलाई आमाको स्थान दिनु र यसको मल-मुत्रलाई परम पवित्र बस्तु मानिन्छ । आयुर्वेदमा त गौमुत्रलाई अति महत्वपूर्ण औषधिका रुपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
पाँच हजार वर्ष पुरानो आयुर्वेदिक ग्रन्थ ‘सुश्रुत संहिता’को सूत्रस्थान ४५औं अध्यायमा गौमूत्रका अनेकौं औषधीय गुणको वर्णन गरिएको छ । यस्तै, ३५ सय वर्ष पुरानो महषिर् वागभट्टद्वारा लिखित ‘अष्टांग हृदय संहिता’मा समेत गाईलाई प्रकृतिको अनुपम उपहार भनिएको छ । अष्टांग हृदय संहितामा गौमुत्र एक्लैले मात्र वात र कफ व्याधिलाई ठीक गर्छ भनिएको छ । अन्य औषधिहरुको साथमा प्रयोग गर्दा पित्त व्याधिलाई पनि निको पार्ने तथ्य पेश्ा गरिएको छ ।
के छ गौमुत्रमा ? : गौमुत्र धेरै औषधि मिलेर बनेको जैविक घोल हो । यो एउटा यस्तो जैविक द्रव्य हो, जसमा हालसम्म २१ वटा धातुलगायत अन्य महत्वपूर्ण जैव रसायनहरु पाइएको छ । गौमूत्रमा पाइने धातुहरु तपसिल छन्- १) नाइट्रोजन- नाइट्रोजनलाई रगत शुद्घ गर्ने ग्यासको रुपमा बुझिएको छ । मात्रा ठीक भएमा यसले रगतमा भएका विषाक्त तत्वहरुलाई निकाल्छ । तर, मात्रा धेरै भएमा नाइटे्रटले हेमोग्लोबिनसँग प्रतिक्रिया गरी अक्सिजन वहन क्षमता र थाइराइड ग्रन्थिको कार्यक्षमता कम गरिदिन्छ । गौमुत्रमा हाम्रो शरीरलाई चाहिनेजति मात्रामा मात्र नाइट्रोजन पाइन्छ । नाइट्रोजनले मूत्रमार्गलाई उत्तेजित गर्नुका साथै मृगौलालाई सक्रिय बनाएर पिसाब लगाउँछ । नाइट्रोजनको अर्को रुप न्ााइटि्रक अक्साइडले मांशपेशीलाई शिथिल राख्नुका साथै मुटु र रक्तनली, स्नायू, प्रतिरक्षा र नशा-हड्डीलाई स्वस्थ राख्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्छ ।
२) सल्फर- सल्फरले कार्टिलेज र हड्डीहरुको निर्माण, इन्सुलिनको उत्पादन, कोषका विषाक्त तत्वहरूको निष्कासन, रक्तनलीमा लचकता, छालामा निखार, कृमीनाश आदिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यसले ठूलो आन्द्राका मलको प्रवाह पनि सहज बनाउँछ । ३) अमोनिया- अमोनियाले पित्त, कफ र वायुलाई सन्तुलन गराउनुकासाथै रक्त निर्माणलाई पनि सहज बनाउँछ । ४) तामा- तामाले मष्तिस्कलाई सक्रिय बनाउनुका साथै प्रतिरक्षा प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्ने माइलिन-सिथलाई सुरक्षित गर्नुका साथै जोर्नी दुखाइका समस्याहरुमा राहत पुर्‍याउँछ । तामाले अनावश्यक रुपमा जमेर बसेको बोसो घटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । यसबाहेक यो धातुले बुढ्यौली रोकथाम गर्नुका साथै लौहतत्वको अवशोषणलाई बढाउने, राता रक्तकोष बन्ने क्रियालाई सघाउने, आँखा, केश र छालाको वर्णलाई जस्ताको त्यस्तै राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।
५) फलाम- फलाम राता रक्तकोष बन्न चाहिने धातु हो । यसले हेमोग्लोबिनको मात्रा नियन्त्रण गर्नुका साथै शरीरको तापक्रम नियन्त्रित गर्ने, मस्तिष्कको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने, मांशपेसी स्वस्थ राख्ने, एनिमिया ठीक गर्ने, रेस्टलेस लेग सिन्ड्रोम ठीक गर्ने, निन्द्रा लगाउन मद्दत गर्ने, धेरै प्रोटिनमा को-ˆयाक्टरका रुपमा काम गर्छ । ६) युरिया- युरिया कीटनाशक रसायन हो । युरियाले छालाको आदर््रतालाई बचाइराख्नुका साथै छालामा भएका मृतकोषहरु हटाउन मद्दत गर्छ । यसले रगतमा भएका अनावश्यक तत्व बाहिर निकाल्न, पिसाब बन्न सघाउने र मृगौलालाई स्वस्थ राख्छ । ७) युरिक एसिड- रगतमा युरिक एसिड बढ्दा गौटबाथ रोग लाग्ने तथ्य धेरैलाई थाहा छ । तर, युरिक एसिडले स्वास्थ्यमा पुर्‍याउने फाइदाबारे धेरै जना अनविज्ञ छौं । युरिक एसिड एउटा बलवान एन्टि-अक्सिडेन्ट हो । यसले मुटु र रक्तनलीका रोग, क्यान्सर र न्युन रक्तचाप ठीक गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।
Previous article(मेराे चाहना)म यसकारण एक साथ कैयौं प्रेमी र पार्टनर चाहन्छु
दाजुले पाँचौँ बच्चाको चाहाना राखे, बहिनीले दिइन् कोख !
महिलाकाे बयान सुन्दा प्रहरी नै छक्क !??
अनलाइन मगाएको सामान घरको ढोकावाट भालुले चोरेर हिँडेपछि (भिडियो हेर्नुस्)
रामायणमा रावणको भूमिका निभाएका अभिनेता अरविन्द त्रिवेदीको निधन
माइकल ज्याक्सन किन अर्लाम लगाएर से’ क्स गर्थे ? थाहा पाउनुहोस् उनीबारे २१ रोचक तथ्य
माछापालनमा नयाँ प्रविधि,यदि माछा पालन गर्नेसाेचाईमा हुनुहुन्छ ( अवश्य पढेर शेयर गर्नुहाेला)